Nso nso a, iOS 9 beta a tọhapụrụ ya. Nke a beta version emewo ka ọtụtụ ịtụnanya ọhụrụ atụmatụ na mmepe na-upgrading ya mgbe niile. Otu nke kasị mma atụmatụ bụ Notes ndozi. Nke mbụ niile, ugbu a, ị nwere ike akpatre Ọkpụkpọ ederede etinyere na gị edeturu. Ị nwere ike ịgbanwe font size site na-ahọpụta aha, isiokwu, ma ọ bụ ozu. Ọ bụ ezie na ị naanị atọ font nha, nke a bụ oké mma. I nwekwara ike obi ike, italicize na gosi gị akụkụ.
Ma, ị ga-kwere anyị ma ọ bụrụ na anyị gwara gị na e nwere onye na ọbụna mma mma? Ugbu a, ị nwere ike akpatre tinye Mgbakwụnye dị ka foto na vidiyo. Ịtụnanya, ọ bụghị ya? Mgbe ị na-emeghe Edeturu, ị nwere ike ịhụ a gbakwunyere ịrịba ama n'elu keyboard. Site na ịme ọpịpị a icon, ị ga-ịnweta toolbar. Site n'enyemaka nke a toolbar ị nwere ike itinye photos, videos, checklists, bugota formatting menu ma ọ bụ ọbụna na-amalite a osisi na gị dee.
Ma, n'ezie, anyị niile na-emehie mgbe ụfọdụ. Ka na-ekwu na i mere a na ndetu ma kwukwara otu ihe dị ezigbo mkpa video i kwesịrị na-akọrọ gị ibe. Na mgbe ahụ, ị ​​mmadụ na mberede ihichapụ a video si edeturu. Atụla egwu ma. Ọ bụrụ na ị ka nwere na video on ị iOS ngwaọrụ mgbe ahụ ị pụrụ nanị tinye ya ọzọ. Ma, ọ bụrụ na ị na-adịghị na video zọpụta na ngwaọrụ gị, mgbe ahụ, ị ​​nwere nnukwu nsogbu. E nweghị ụzọ tinye na video ọzọ ma ọ bụrụ na ọ na-adịghị adị na ekwentị gị.
Ma, luckily, n'oge technology bụ otú elu na ihe ọ bụla nwere ike ime. Na video nwere ike natara site gị iPhone, iTunes ma ọ bụ ọbụna iCloud na enyemaka nke a ụfọdụ software. Ma ọ bụ, kama nke na-agbake gị video, ị pụrụ nanị naghachi dum Cheta. The software a na-akpọ Wondershare Dr.Fone maka iOS.
Naghachi ehichapụ video si iPhone ndetu
Wondershare Dr.Fone Maka iOS (iPhone data mgbake) bụ ikekwe ndị kasị mma data naghachi software maka iPhone, iPad na iPod. Na nke a software i nwere ike naghachi ihe ọ na-ehichapụ faịlụ site na iOS ngwaọrụ. Na nanị otu click, ị nwere ike naghachi ehichapụ kọntaktị, ederede ozi, foto, ndetu, olu memos, Safari Ibe edokwubara na ọbụna karị. Ke adianade do, Wondershare Dr.Fone-enye gị ohere iji naghachi a nile data si iCloud na iTunes. Ya mere, ugbu a, ị na-o yiri nnọọ ka naghachi na-ehichapụ video. Ihe kacha mma banyere Wondershare Dr.Fone bụ na ọ bụ dakọtara na ọhụrụ iOS nsụgharị, nakwa dị ka na iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPad Air 2 na ndị ọzọ.
Mgbe scanning ehichapụ faịlụ i nwere ike na-abịa gafee a nnukwu ọnụ ọgụgụ nke faịlụ. N'ezie, ị ga-enweghị naghachi ha nile. Nanị ịhọrọ nke faịlụ na ị chọrọ iji naghachi. Lee ndị isi atụmatụ nke Wondershare Dr.Fone maka iOS:
Weghachite fọrọ nke nta ọ bụla furu efu ụdị data gị iOS ngwaọrụ
Ịhọrọ nke faịlụ na ị chọrọ iji naghachi
Incredibly ngwa ngwa Doppler
Mfe iji, niile i nwere ime bụ ime ka di na nwunye nke òké clicks
Naghachi faịlụ site iTunes ndabere na Wondershare Dr.Fone
1. Launch Wondershare Dr.Fone maka iOS. Mgbe ahọrọ "naputa site na iTunes ndabere File." Mgbe na pịa na iTunes ndabere mgbake ngwá ọrụ. The ngwá ọrụ ga iṅomi ma chọpụta niile iTunes ndabere faịlụ na-akpaghị aka na kọmputa gị. Mgbe Doppler a mere, nkwado ndabere na mpaghara faịlụ ga-egosipụta na window. Ị nwere ike gosi nke ndabere bụ nri onye site na-achọ na ụbọchị ya e kere on.
2. Mgbe ahụ, ị ​​na-azọrọ na iṅomi faịlụ site na nkwado ndabere na mpaghara. Họrọ iTunes ndabere faịlụ na ị na-eche bụ nri onye na pịa "Malite iṅomi." The Doppler nwere ike iri a di na nwunye nke nkeji, dabere na size nke gị ndabere faịlụ.
3. Mgbe Doppler a mere, ihe niile n'ebe na-ekpe ime bụ ịhụchalụ faịlụ ma họrọ ndị ị chọrọ iji naghachi. Niile ụbọchị ga-egosipụta na edemede. Ịnwere ike ihuchalu ọ bụla faịlụ n'ihu mgbake na selectively ịhọrọ nke ndị ị chọrọ gbakee. Mgbe ị na-ahọrọ faịlụ, pịa "Naghachi" button na ala. Ọ bụrụ na gị iOS ngwaọrụ na jikọọ na kọmputa gị, niile nke faịlụ nwere ike natara ngwaọrụ gị kpọmkwem. Ọzọkwa, ị nwere ike ịhọrọ "Chọọnụ" igbe na elu-nri akuku ịchọta gị faịlụ ọzọ mfe.
Ma, na ọ bụ ya!
Naghachi faịlụ site iCloud ndabere na Wondershare Dr.Fone
1. Open Wondershare Dr.Fone maka iOS ma họrọ ndị na-esonụ mgbake mode "naputa site na iCloud ndabere faịlụ" n'elu. Mgbe ahụ window ka n'elu foto n'okpuru ga-egosipụta. Gị mkpa iji tinye gị iCloud Apple ID na paswọọdụ, na mgbe ahụ nbanye. Wondeshare ewe nzuzo gị kpọrọ ihe. The software ga-mgbe na-a ndekọ nke gị Apple akaụntụ Ama ma ọ bụ ọdịnaya, n'agbanyeghị ihe na-eme.
2. Mgbe ị abanye na n'ime iCloud, software ga-akpaghị aka chọta niile nke gị iCloud ndabere faịlụ nke na-azọpụta na akaụntụ gị. Họrọ nkwado ndabere na mpaghara faịlụ ị na-eche bụ ihe kwesịrị ekwesị na ibudata ya site na ịpị "Download" bọtịnụ.
Mgbe ị na-ahọrọ ibudata, a ọhụrụ window ga-gbapụta. Nke a window enye gị ohere ịhọrọ nke faịlụ na ụdị ịchọrọ ibudata. Ọ bụrụ na ị na-achọ a video, mgbe ahụ i kwesịrị download videos naanị. Otú a ị ga-azọpụta oge ụfọdụ. Mgbe ahụ, pịa "iṅomi" bọtịnụ.
3. Mgbe Doppler zuru ezu ị ike ihuchalu niile nke faịlụ dị na gị iCloud ndabere. Dị nnọọ ka na aga na nkuzi, ị nwere ike ịhọrọ nke faịlụ na ị chọrọ iji naghachi. Site na ịpị "Naghachi" button ị nwere ike họrọ ịzọpụta faịlụ ndị ahọrọ na kọmputa gị. Ma ọ bụ, ị nwekwara ike ịhọrọ ịzọpụta gị natara kọntaktị, ozi, na ndetu na gị na iOS ngwaọrụ ma ọ bụrụ na e jikọtara gị na kọmputa.
Na na bụ niile i nwere na-eme!
Ọ bụrụ na ị na-achọ ụzọ isi na-naghachi na video i ehichapụ a dee, ị nwere ike ịchọ ya ma ọ bụ dee.
Ebe a bụ ụfọdụ kwuru banyere ọhụrụ mbipute nke edeturu na iOS 9:
N'ezie egwu mma ka iji tụnyere iOS 8
M nnọọ obi ụtọ n'elu ọhụrụ a ndetu ngwa. My ahu na-n'ikwe ka ewere. Nke a ga-otu nke kasị ukwuu ngwa na Apple mgbe ọ bụla mepụtakwara. The mkpali na-eme m ka m na-eme ihe iju ways.my ahu na-adịghị arụ ọrụ nkịtị. Way oge dị ukwuu a na-nọrọ na-asa ahụ. Atọhapụ m obi ụtọ. Amaghị m otú oge m nwere ike na-eche na-enweta ọhụrụ ndetu ngwa! Naanị nnukwu apple nwere ike ịza na.
Apụghị m kwere na ha ka na-eji linin udidi na ndabere. Anya jọgburu onwe.
> Resource> Naghachi> Video na Notes ehichapụ! Olee otú iji naghachi?